Mashandisiro ekushandisa iyo nyeredzi system muMumhanzi muIOS 10.2 | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | iOS 3, Zvidzidzo uye zvinyorwa
IOS Music application yakachinja zvakanyanya nekuuya kweIOS 10. Shanduko zhinji dzaive dzakanaka, kunyange hazvo asiri munhu wese aidzida zvakaenzana, asi paive nezvimwe zvataisanyatsonzwisisa, sekubvisa mabhatani ekudzokorora kana kusundira kana kutadza kushandisa iyo system yekuyera zvemukati nenyeredzi. iOS 10.2 yadzosa hurongwa hwekupimha iyo, mukuwedzera pakumaka mimhanzi zvinoenderana nezvatinoda, ichavandudza zvirevo zveWe Iwe tebhu reApple Music.
Zvichida kuti ukangoverenga iyo ndima yapfuura waenda nekukurumidza uye nekukurumidza kuyedza kumaka mimwe misoro ine nyeredzi shanu uye usati wawana sarudzo. Imhaka yekuti yakaremara nekutadza. Muizvi pambiru Isu tichakudzidzisa maitiro ekumisikidza iyo nyeredzi yekuyera system yeiyo iOS 10.2 mimhanzi app uye maitiro ekuwedzera aya ratings.
1 Maitiro ekugonesa chiyero chenyeredzi yeIOS 10.2 Music
2 Maitiro ekuwedzera nyeredzi kumimhanzi muIOS 10.2
Maitiro ekugonesa chiyero chenyeredzi yeIOS 10.2 Music
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, kumisikidza iyo nyeredzi chiyero cheMusic application muIOS 10.2 iri nyore kwazvo. Ingo tevera aya matanho:
Nhanho yekutanga inogona kuita senge truism isina kubatanidzwa mune zvakambotorwa, asi ini ndinozvitaura zvakadaro kana paine chero vasipo-vane pfungwa. Tinofanira kuva neIOS 10.2 yakaiswa kushandisa iyi nyowani-yekare sarudzo. Kuti uve nechokwadi, isu tichavhura iyo Settings application, enda uye uone kuti isu tine iOS 10.2 yakaiswa.
Kana isu tine iOS 10.2 yakaiswa, isu tinovhura iyo Zvirongwa application uye enda kuMusic chikamu.
Pakupedzisira, isu tinoshandisa switch kana toggle Inoti "Star Rating".
Maitiro ekuwedzera nyeredzi kumimhanzi muIOS 10.2
Kamwe sarudzo painenge yashandurwa, kuwedzera nyeredzi hakuna kunyanya kuoma. Tichazviita zvinotevera:
Isu tinopururudzira kune chero rwiyo.
Iye zvino tinogona kuzviita nenzira mbiri dzakasiyana:
Kana isu tine iPhone 6s / Plus kana iPhone 7 / Plus, isu tichadzvanya zvakanyanya pazita rerwiyo kuitira kuti sarudzo dzionekwe.
Kana isu tine chishandiso cheIOS isina 3D Kubata, isu tichafanirwa kubata nekubatirira parwiyo.
Nhanho inotevera ndeyekudhonza pa "Rate Rwiyo".
Iwindo rinobuda richaonekwa nemavara anoti "Star Rating" uye nyeredzi shanu dzisingatarise. Isu takasarudza kubva pa5 kusvika pa1 (uye Equilibrium's "Born to Be Epic" - zvinova zvandiri kuteerera izvozvi - inowana ... nyeredzi shanu).
Chekupedzisira, isu ticha bata pa «Ok».
Kune dzimwe nzira mbiri dzekuzviita:
Kana isu tiri mukutamba kwekutarisa, tinobata pamapoinzi matatu (…) padyo neiyo AirPlay icon uye tinoenderera kubva padanho rechina.
Uchishandisa Siri. NaSiri zvese zviri kuyedza. Kana tikati "Rate rwiyo urwu shanu nyeredzi", wedu anoteerera mubatsiri anozviitira isu.
Ini pachangu, ini handisati ndambove fan weaya masystem masisitimu, asi iwo anogona kutibatsira kugadzira smart smart zvinyorwa. Asi chinonyanya kundifadza, sezvo ini ndichida kugadzira zvinyorwa zvangu nemaoko, ndezvekuti kana uchiongorora nziyo idzi Apple Music ichaziva zvandinofarira zviri nani uye ichandipa zvemukati zvinokodzera ini zvakanyanya. Unofungei? Unogamuchira kudzoka kweyeredzi chiyero system kune iOS?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa iyo nyeredzi system muMumhanzi muIOS 10.2
Sarudzo mumenyu yemimhanzi haioneke pane iyo iPhone 7 uye ini ndiri paIOS 10.2 chaizvo, chero mazano?
vhara imwe nziyo imwe nenyeredzi muraibhurari yako yeTunes… ..! kana zvisina kudaro sarudzo iri pachiridzwa icharamba yakavanzwa
Tafadzwa chinyama (@ tanyaradzwachaka7) akadaro
Kwakanaka, mhinduro yandaitsvaga, maita basa.
Pindura kuna Alex Carrillo (@ a7c4l)
Zvakare iine iPhone 7 uye iOS 10.2
Yakasimbiswa, ini zvakare ndine iPhone 7 Plus> iOS 10.2 uye sarudzo haioneke.
Ini ndakangoimisikidza mu6 plus, izvo zvinonditsamwisa kuti raibhurari yangu yese paitunes yanga yatove nayo nenzira iyoyo uye ivo vakaibvisa, ikozvino inotamba zvakare mumwe neumwe chii chinorwadza pambongoro.
Iphone 7 ine iOS 10.2 uye hapana sarudzo
Mhoroi, Fran nevose vasingashande. Ini chokwadi handiwani. Zvichienderana nenyaya yekuti iwe une iOS 10.2, ndiyo imwe yezvinhu zvitsva zveiyo yazvino vhezheni. Izvo zvinongoitika kwandiri kuti iwe unomanikidza kutanga patsva kuti uone kana ichiita kuti zvioneke, nekuti zvishoma nezvishoma kuisunungura sezvingaitwe neWhatsApp mune mamwe mabasa hazvinganzwisisike kana.
Ndiri kuzvizama kubva kuIpad 4 ine iOS 10.2 chero… .. zvinoita sekunge beta chete ndiyo yaive nesarudzo uye pakaburitswa yepamutemo, vakabvisa zvekare izvi!
Ndazvidzora !!!!!!! zvishandiso zvese zvinounza sarudzo yekumisikidza ratidziro yenziyo nenyeredzi…. Kana ikasaoneka muchikamu chemimhanzi, imo nekuti raibhurari yavo iTunes haina kukoshesa rwiyo rwumwe chete nenyeredzi…. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikoshesa kubva kuTunes uye uchifananidza mimhanzi yako nechombo chako, dzokera kuchikamu chemimhanzi pane chishandiso neIOS 10.2 uye ipapo unoenda ... taraaaaan! iko kushanduka kunoonekwa !!
Apple inoburitsa beta 1 yeIOS 10.2.1, tvOS 10.1.1 uye macOS 10.12.3